【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】ဆီးခြိုရောဂါ နှငျ့ လူပွောမြားတဲ့ HbA1c | Opinion Leaders
မွနျမာနိုငျငံမှာ မကူးစကျနိုငျသောရောဂါ (Non communicable diseases) အုပျစုထဲက ဆီးခြို၊ သှေးတိုး ရောဂါတှကေ တျောတျောအဖွဈမြားတဲ့ထဲမှာပါဝငျပါတယျ။ အိမျတဈအိမျမှာ ဆီးခြို ဒါမှမဟုတျ သှေးတိုး ရောဂါရှိတဲ့သူ တဈယောကျ လောကျတော့ ရှိကွတာမြားပါတယျ။ ဆီးခြိုရောဂါရဲ့ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးတှဖွေဈတဲ့ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးတာ၊ လဖွေတျတာ၊ ကြောကျကပျပကျြစီးတာ စတာတှကေ အသကျဆုံးရှုံးသညျအထိ ဖွဈနိုငျလို့ ဆီးခြို ထိနျး မထိနျးသခြော ဂရုစိုကျ ဖို့လိုမှာပါ။ ခုနောကျပိုငျး ဆီးခြိုရောဂါရှငျတှကွေားမှာ HbA1c အကွောငျး လူသိမြားလာကွတယျ။ လကျထိပျသှေးဖောကျစဈတာအပွငျ HbA1c လညျး စဈသငျ့ကွောငျး အပွောမြားလာကွတယျ။
HbA1c ဆိုတာ သှေးထဲမှာရှိတဲ့ glucose တှဲထားသော ဟီမိုဂလိုဘငျ (Glycated Hb) အခြိုးအဆ ကိုတိုငျးတာပါ။ ဟီမိုဂလိုဘငျဆိုတာ RBC သှေးနီဥထဲမှာရှိတဲ့ Fe (Iron) ပါဝငျတဲ့ မျောလီကြူးလေးတှပေါ။ ဒီဟီမိုဂလိုဘငျမျောလီကြူးလေးတှမှော glucose လာတှယျခြိတျလိုကျရငျတော့ Glycated Haemoglobin လို့ချေါပါတယျ။
သှေးထဲမှာ သကွားဓါတျ (glucose) မြားလလေေ ဒီ HbA1c ပမာဏလညျး မြားလလေပေါ။ ဒါကွောငျ့ HbA1c ပမာဏကို ကွညျ့ခွငျးဖွငျ့ သှေးတှငျးသကွားဓါတျအနညျးအမြားကို သိနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဒီ HbA1c ကိုတိုငျးတာခွငျးဖွငျ့ လကျရှိ သကွားဓါတျ ထိနျး မထိနျးအပွငျ လှနျခဲ့တဲ့ လပိုငျးအတှငျး သုံးလလောကျအတှငျးက သှေးတှငျး သကွားဓါတျအခွအေနကေိုပါ သိနိုငျပါတယျ။ (အကွောငျးရငျးကတော့ သှေးနီဥ (RBCs) လေးတှရေဲ့ သကျတမျး တနညျးအားဖွငျ့ RBC လေးတှကေို ခန်ဓာကိုယျက ဖကျြပဈဖို့ ရကျပေါငျး ၁၂၀ ကွာလို့ပါ) ဒီအခကျြက sugar control ကောငျး မကောငျးစဈရာမှာ အသုံးဝငျပါတယျ။ လကျထိပျသှေးဖောကျစဈခွငျးက လတျတလော သှေးတှငျး သကွားဓါတျအခွအေနကေိုသာ သိနိုငျတာပါ။
HbA1c ကို ဘယျလို ယူနဈတှနေဲ့ ဖျောပွလဲ?
ဓါတျခှဲခနျးအမြားစုကတော့ Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) unit ဖွဈတဲ့ % (4%, 5%) စသညျဖွငျ့ ဖျောပွကွသညျ။ ခုနောကျပိုငျး International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) က IFFC standardised HbA1c unit အဖွဈ mmol/mol နဲ့လညျး သတျမှတျဖျောပွကွတယျ။ ဒီတော့ ယူနဈနှဈမြိုးနဲ့ပွလရှေိ့တယျ
HbA1c ရဲ့ အသုံးဝငျပုံ
(၁) ဆီးခြိုရောဂါ diagnosis သတျမှတျတဲ့ နရောမှာ သုံးခွငျး
- HbA1c 48mmol/mol (6.5%) နှငျ့အထကျ ရှိရငျ ဆီးခြိုရှိပီလို့ သတျမှတျနိုငျပါတယျ။
-HbA1c 42-47mmol/mol (6-6.5%) အတှငျးကိုတော့ NICE guideline အရ ဆီးခြိုအကွို အဖွဈသတျမှတျပါတယျ။
(American Diabetes Association, ADA) ကတော့ 39-47mmol/mol (5.7-6.5%) နဲ့ သတျမှတျပါတယျ)
(၂) လှနျခဲ့သော လပိုငျးအတှငျး သုံးလလောကျအတှငျး ဆီးခြို ထိနျး မထိနျး monitor လုပျခွငျး
- HbA1c 4-5.9% ကွားကို normal value အဖွဈ ဓါတျခှဲခနျးတျောတျောမြားမြားက သတျမှတျကွပါတယျ။
-အကွမျးဖငျြး 7% အောကျဆိုရငျတော့ ဆီးခြို control ရတယျ ပွောနိုငျပါတယျ
-HbA1c 8% ကြျောရငျတော့ poor control ဆီးခြို မထိနျးဘူး ပွောရမှာပါ
(တနျဖိုးတှကေ ဆီးခြိုဖွဈတဲ့ ကာလနဲ့ ရောဂါပွငျးထနျမှုပျေါမူတညျပွီး အနညျးငယျကှာခွားနိုငျတယျ)
- သှေးအားနညျးနတေဲ့ သူနဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှမှောတော့ HbA1c ပမာဏက သာမနျထကျ နညျးနတေတျပါတယျ။
- သှေးရောဂါ အခြို့ (Haemoglobinopathy) ရှိတဲ့သူတှမှော HbA1c ကိုတိုငျးတာရနျ ခကျခဲပါတယျ။
-ဒါကွောငျ့ ဒီလူတှမှော တိုငျးတာရငျတော့ သတိပွုဖို့လိုမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကူးစက်နိုင်သောရောဂါ (Non communicable diseases) အုပ်စုထဲက ဆီးချို၊ သွေးတိုး ရောဂါတွေက တော်တော်အဖြစ်များတဲ့ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ အိမ်တစ်အိမ်မှာ ဆီးချို ဒါမှမဟုတ် သွေးတိုး ရောဂါရှိတဲ့သူ တစ်ယောက် လောက်တော့ ရှိကြတာများပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာ၊ လေဖြတ်တာ၊ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးတာ စတာတွေက အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်လို့ ဆီးချို ထိန်း မထိန်းသေချာ ဂရုစိုက် ဖို့လိုမှာပါ။ ခုနောက်ပိုင်း ဆီးချိုရောဂါရှင်တွေကြားမှာ HbA1c အကြောင်း လူသိများလာကြတယ်။ လက်ထိပ်သွေးဖောက်စစ်တာအပြင် HbA1c လည်း စစ်သင့်ကြောင်း အပြောများလာကြတယ်။
HbA1c ဆိုတာ သွေးထဲမှာရှိတဲ့ glucose တွဲထားသော ဟီမိုဂလိုဘင် (Glycated Hb) အချိုးအဆ ကိုတိုင်းတာပါ။ ဟီမိုဂလိုဘင်ဆိုတာ RBC သွေးနီဥထဲမှာရှိတဲ့ Fe (Iron) ပါဝင်တဲ့ မော်လီကျူးလေးတွေပါ။ ဒီဟီမိုဂလိုဘင်မော်လီကျူးလေးတွေမှာ glucose လာတွယ်ချိတ်လိုက်ရင်တော့ Glycated Haemoglobin လို့ခေါ်ပါတယ်။
သွေးထဲမှာ သကြားဓါတ် (glucose) များလေလေ ဒီ HbA1c ပမာဏလည်း များလေလေပါ။ ဒါကြောင့် HbA1c ပမာဏကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်အနည်းအများကို သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီ HbA1c ကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့် လက်ရှိ သကြားဓါတ် ထိန်း မထိန်းအပြင် လွန်ခဲ့တဲ့ လပိုင်းအတွင်း သုံးလလောက်အတွင်းက သွေးတွင်း သကြားဓါတ်အခြေအနေကိုပါ သိနိုင်ပါတယ်။ (အကြောင်းရင်းကတော့ သွေးနီဥ (RBCs) လေးတွေရဲ့ သက်တမ်း တနည်းအားဖြင့် RBC လေးတွေကို ခန္ဓာကိုယ်က ဖျက်ပစ်ဖို့ ရက်ပေါင်း ၁၂၀ ကြာလို့ပါ) ဒီအချက်က sugar control ကောင်း မကောင်းစစ်ရာမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ လက်ထိပ်သွေးဖောက်စစ်ခြင်းက လတ်တလော သွေးတွင်း သကြားဓါတ်အခြေအနေကိုသာ သိနိုင်တာပါ။
HbA1c ကို ဘယ်လို ယူနစ်တွေနဲ့ ဖော်ပြလဲ?
ဓါတ်ခွဲခန်းအများစုကတော့ Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) unit ဖြစ်တဲ့ % (4%, 5%) စသည်ဖြင့် ဖော်ပြကြသည်။ ခုနောက်ပိုင်း International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) က IFFC standardised HbA1c unit အဖြစ် mmol/mol နဲ့လည်း သတ်မှတ်ဖော်ပြကြတယ်။ ဒီတော့ ယူနစ်နှစ်မျိုးနဲ့ပြလေ့ရှိတယ်
HbA1c ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ
(၁) ဆီးချိုရောဂါ diagnosis သတ်မှတ်တဲ့ နေရာမှာ သုံးခြင်း
- HbA1c 48mmol/mol (6.5%) နှင့်အထက် ရှိရင် ဆီးချိုရှိပီလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
-HbA1c 42-47mmol/mol (6-6.5%) အတွင်းကိုတော့ NICE guideline အရ ဆီးချိုအကြို အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။
(American Diabetes Association, ADA) ကတော့ 39-47mmol/mol (5.7-6.5%) နဲ့ သတ်မှတ်ပါတယ်)
(၂) လွန်ခဲ့သော လပိုင်းအတွင်း သုံးလလောက်အတွင်း ဆီးချို ထိန်း မထိန်း monitor လုပ်ခြင်း
- HbA1c 4-5.9% ကြားကို normal value အဖြစ် ဓါတ်ခွဲခန်းတော်တော်များများက သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
-အကြမ်းဖျင်း 7% အောက်ဆိုရင်တော့ ဆီးချို control ရတယ် ပြောနိုင်ပါတယ်
-HbA1c 8% ကျော်ရင်တော့ poor control ဆီးချို မထိန်းဘူး ပြောရမှာပါ
(တန်ဖိုးတွေက ဆီးချိုဖြစ်တဲ့ ကာလနဲ့ ရောဂါပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်ပြီး အနည်းငယ်ကွာခြားနိုင်တယ်)
- သွေးအားနည်းနေတဲ့ သူနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေမှာတော့ HbA1c ပမာဏက သာမန်ထက် နည်းနေတတ်ပါတယ်။
- သွေးရောဂါ အချို့ (Haemoglobinopathy) ရှိတဲ့သူတွေမှာ HbA1c ကိုတိုင်းတာရန် ခက်ခဲပါတယ်။
-ဒါကြောင့် ဒီလူတွေမှာ တိုင်းတာရင်တော့ သတိပြုဖို့လိုမှာပါ။